Marcelo Oo Sheekeeyey Sidii Ay Juventus Ugu Garaaceen Finalkii Cardiff & Sida Ay Barcelona Ugula Dagaallami Doonaan LaLiga Illaa Kulanka Ugu Dambeeya - Jigjiga Online
HomeCiyaarahaMarcelo Oo Sheekeeyey Sidii Ay Juventus Ugu Garaaceen Finalkii Cardiff & Sida Ay Barcelona Ugula Dagaallami Doonaan LaLiga Illaa Kulanka Ugu Dambeeya
Marcelo Oo Sheekeeyey Sidii Ay Juventus Ugu Garaaceen Finalkii Cardiff & Sida Ay Barcelona Ugula Dagaallami Doonaan LaLiga Illaa Kulanka Ugu Dambeeya
Real Madrid waxay u dabbaal-degaysaa sannad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay guusha koobkeedii 12aad ee Champions League ee ay ku garaacday Juventus, kaas oo kaliya sannad ka horreeyey midkii ay Magaalada Kiev kusoo burburisay Liverpool.
Difaaca Real Madrid ee Marcelo ayaa wax laga weydiiyey guushii ay maalintaas farxadda badan ugu dabbaal-dageen, waxaana uu ka sheekeeyey qaabkii ay Los Blancos ku dagaallantay illaa dhamaadkii ee ay guusha gacanta ugu dhigtay xilli ay dadka qaarkood saadaalinayeen in Juventus oo koox dheeli-tiran oo difaac adag leh ay koobka ku garaaci doono.
“Waxa ugu muhiimsan waa in marka aanu koob ku guuleysano, in aanaan ka fikirin inaanu istaagno oo aanu ogolaano in waqti na dhaafo. Mar walba waxaanu ka fikirnaa sidii aanu wax kasii badan ugu guuleysan lahayn, xattaa haddii aanu saddex xidhiidh ah hananno.” Ayuu yidhi Marcello oo telefishanka kooxdiisa ee Real Madrid TV uga warramay dhacdadii saddex sannadood ka hor.
“Markii aan imid, Madrid waxay i bartay sida loo dagaallamo illaa dhamaadka ee loogu guuleysto finalada. Wax badan oo arrintan ku saabsan ayaan ka bartay Real Madrid. Marka aanu ka fikirno inaanu shay ku guuleysanay, waxaanu haddana doonaa inaanu mar labaad ku guuleysano. Qaabkaas ayaanu u fikirnaa.” Ayuu raaciyey.
Guusha ay Real Madrid kaga gaadhay Cardiff, waxay ahayd 4-1, laakiin ka hor intii aanay ciyaartu bilaabmin waxay xiddigaha Zidane kasii fikirayeen sida ay difaaca kooxda Talyaaniga ah goolal uga dhalin karayaan.
Marcelo oo qisadaas ka sheekaynaya waxa uu yidhi: “Waxaanu ogeyn inaanu ka hor tegayno koox difaaceedu aad u adag yahay oo aan goolal badan laga soo dhalinin Champions League.
“Mar walba waxaanu ogeyn inaanu goolal dhalin doono, iyaguna ay naga dhalin doonaan. Waxay ahayd inaanu noqono kooxda xoogga badan leh ee awoodda u yeelanaysa inay koobka qaaddo.
“Kubadda cagta kaliya kama fikiri kartida inaad goolal dhaliso iyo waxyaabo fudud, laakiin, dhamaadka ciyaartoyga awoodda u leh inuu xamilo culayska finalka.
“Waxa la nagu qabtay 1-1 qaybtii hore annaga oo wada joogna, finalkana kaliya maaha inaad ciyaarayso balse waa inaad guuleysato, waa sidaas sida ay Real Madrid ay mar walba ahaanaysaa.
“Qaybta hore aad ayaanu u fiicnayn laakiin qaybtii u dambaysa waxba ma fududaadaan.
“Waxaanu aragnay meelo bannaan, tababaruhuna wuxuu mar walba noo sheegayay inaanu dulqaad lahaano sababtoo ah, haddii ay meelo bannaan soo baxaan waanu dhalin karaynaa. Toogasho meel fog ah ayaa geli karaysa (goolka), waxaanu awoodnay inaanu dhalino, waxay u muuqatay inay fududahay iyo inaanu Juve ka sarrayno, laakiin way adkayd. Waxaanu muujinay samir, adkaysi iyo midnimo aad ah.”
Marcelo waxa uu ka hadlay sababta ay Real Madrid u fiicnaato kulamada finalka, waxaanu yidhi: “Real Madrid way awoodaysataa finalada. Waxaanu nagu jirta maskax noocaas ah, dhamaadkana waxaad arkaysaa saaxiibkaa oo wax walba huraya, adiguna waa inaad sidoo kale hurto. Tababaruhuna waa sidaas oo kale.
“Dhiirigelinta ayaa ku siinaysa dareen wanaagsan, ciyaarta ayaad ku dhex koraysaa, marka aad final ciyaartana waa inaad guuleysato.”
Horyaalka waddanka Spain ee LaLiga Santander ayaa dib loo bilaabayaa, waxaanay Real Madrid la ciyaari doontaa Eibar kulankeeda ugu soo horreeya ee June 14, waxaanu hamigoodu yahay inay meesha ka saaraan labada dhibcood ee ay Barcelona ka horreyso.
“Horumar ayaanu samaynaynaa, waxa nasoo maray waqti adag oo aanaan wax tababar ah samaynin ama kubbad ciyaarin, koox ahaanna aanaan u xidhiidhin. Waxa na sugaya 11 ciyaarood oo final ah oo ay tahay inaanu wax walba u samayno sidii aanu u guuleysan lahayn.” Ayuu yidhi Marcelo oo wax laga weydiiyey.
Difaaca reer Brazil waxa uu horyaalka sannadkan u arkaa koob ay kooxdiisu hammuun u qabto oo ay ku qasban yihiin inay ku guuleystaan, waxaanu yidhi: “Waxaanu ciyaaraynaa koob aad muhiim u ah; waxaanu isku dayi doonaa inaanu wax walba ku guuleysano (kulamada u hadhay).
“Waxaanu ku faraxsanahay inaanu awoodnay inaanu mar labaad tababaray, sidoo kale aanu ogaanay inaanu mar kale ciyaarayno horyaalka LaLiga.”
Shir Lagaga Hadlay Arrimo Xaasaasi Ah Oo Ka Dhacay Addis Ababa Iyo Nuxurka Qodobbadii Ay Soo Jeediyeen Xildhibaannada Tacaddiga Lagula Kacay